ROM Toolbox Pro 6.5.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.5.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား ROM Toolbox Pro
ROM Toolbox Pro ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ROM ကို Toolbox ကို အတိုင်းအမြစ်အသုံးပြုသူများအတွက် APP ကို ​​ ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ROM ကို Toolbox ကိုလှပတဲ့နဲ့ interface ကိုအသုံးပြုပါရန်လွယ်ကူနှင့်တသားတနဂါးပလီကေးရှင်းသို့အားလုံးအကြီးအအမြစ် app များကိုပေါင်းစပ်။ ROM ကို Toolbox ကိုသင့်အကြိုက်မှသင့်ရဲ့ Android device ကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တိုင်း tool ကိုရှိပါတယ်။ အစားအခြားအက်ပ်အပေါ် $ 30 ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြုန်း၏ ROM ကို Toolbox ကို လာပြီအားဖြင့် 85% Save ။
ROM ကို Toolbox ကို Lifehacker, XDA-Developers, Droid-ဘဝ, အန်းဒရွိုက်ဗဟို, RootzWiki, အန်းဒရွိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အခြားပေါ်ပြူလာဆိုက်များပေါ်တွင် featured ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျတို့သညျကခစျြလိမျ့မညျသိကြ၏ 14,000 ကျော်5ကြယ်အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း! ★★★★★
ဒီ app ကိုအမြစ်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဖော်ရွေထောက်ခံမှုများအတွက် contact@maplemedia.io မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေဆိုကူညီဖို့အတှကျဝမျးသာဖြစ်လိမ့်မည်။
ROM ကို Toolbox ကိုတစ် All-In-One သို့ Titanium Backup, ROM ကိုမန်နေဂျာ Root Explorer ကို, SetCPU, အသွင်ပြောင်း, Autorun Manager ကိုကို Terminal emulator, Script Manager ကို, SD က Booster, BuildProp အယ်ဒီတာ, စာလုံး Installer, Boot ကို Animation ရဲ့ Installer & အများအပြားနောက်ထပ် app များကဲ့သို့ app များကိုပေါင်းစပ် app ကို! ဒီနေရာတွင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်အင်္ဂါရပ်တချို့၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
★ ROM ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု ★
☆ ROM တွေကို & themes များ Install လုပ်ပါ။ AOKP, CyanogenMod နှင့်အခြားလူကြိုက်များ ROM တွေကိုထည့်သွင်း။
☆ nandroid backup တခုကိုဖန်တီး, စီမံခန့်ခွဲ & restore
☆ Wipe data ကို, cache ကို, Dalvik-Cache, ဘက်ထရီ stats
☆သင့်ရဲ့ SD ကဒ်ကနေအများအပြား ROM တွေကို & ZIPs Install
★ Root Explorer ကို ★
☆ Access ကို (ထိုတွေ့ရခဲသောဒေတာဖိုင်တွဲအပါအဝင်!) ဟာ android ရဲ့ file ကိုစနစ်၏မြေတပြင်လုံး။
☆အသုတ်လိုက်မိတ္တူ / ငါးပိ, ဇစ်, ကတ္တရာစေး, delete, အမြင်, ပြင်ဆင်ရန်, ရှယ်ယာ, နှင့်မည်သည့်ဖိုင်များကိုသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါရွှေ့
☆ပြောင်းလဲခြင်း file ကိုခွင့်ပြုချက်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု
★ Scripter & Terminal နှင့် emulator ★
အမြစ်အဖြစ်☆ ဖန်တီး. run script များ
☆မှာ-Boot တက်ကို run ဖို့သင့် script များ Set
★ အော်တို Start ကို Manager ကို ★
က start-up, အပေါ်ကို run ကြောင်း☆ကို disable / Enable apps များ
☆ Enable / ဆိုထုတ်လွှင့်လက်ခံ, လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကို disable
စသည်တို့ကို☆ Reboot ပြန်လည်နာလန်ထူ, powerdown, Bootloader ကို, ပြန်ဖွင့်ပြ status bar,
★ စာလုံး Installer ★
☆ကြီးမားတဲ့စာရင်းထဲမှသို့မဟုတ်သင့် sdcard ကနေထုံးစံဖောင့် Install
အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်☆သတ်မှတ်မည်ဖော & မိတ်ဆွေများကသူတို့ကိုပို့ပေးပါ
★ Boot ကို Animation ရဲ့ Installer ★
☆ကြီးမားတဲ့စုဆောင်းမှုထဲမှသို့မဟုတ်သင့် sdcard ကနေထုံးစံ Boot တက် animations တွေကို Install & preview ကို
☆တစ်ဦး GIF ကိုဖိုင်ကနေ Boot တက်ကာတွန်း Create
☆အသစ်တစ်ခုကိုကျပန်း Boot တက်ကာတွန်းသင် Boot-တက်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ရှိပါလေ!
★ Theme Manager ကို & Statusbar Icon Changer ★
☆ (အသွင်ပြောင်းသဟဇာတ) အပြည့်အဝ themes များ ဖန်တီး. install
☆စသည်တို့ကိုသင့်ရဲ့ status ကို Wi-Fi အဘို့အထုံးစံ icon တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဘား, signal ကို, GPS Customize
☆တစ်ဦးစာရင်းထဲကတစ်ဦးထုံးစံတပါးတည်းဖို့ status bar မှာသင့်ရဲ့ဘက်ထရီ icon များကိုပြောင်း 200+
★ Boot ကိုအမှတ်တံဆိပ် Changer ★
☆သင့်ရဲ့ Boot တက်လိုဂိုထောက်ခံဖုန်းများများအတွက်ပြောင်းနည်း
☆ T-Mobile ကအဓိကအကြောင်းအရာ Chooser များအတွက် themes များများစာရင်းကိုကြည့်ရန်
★ သတ်မှတ်မည် CPU ကို ★
☆ SetCPU & ချုံ့ချဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
☆ CPU ကို Profiles
စွမ်းဆောင်ရည်အရှိန်မြှင့်ရန်☆ Kernel အပြောင်းအလဲ
★ Build.prop Editor ကို ★
☆အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ build.prop တည်းဖြတ်
☆ပြောင်းလဲခြင်း LCD သိပ်သည်းဆ, ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးတကျအောငျ, စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်
★ အော်တိုမှတ်ဉာဏ် Manager ကို ★
☆ minfree တန်ဖိုးများကို Set & ရလာဒ်ကဒိကနေ select လုပ်ပါ။ Boot တက်မှာတန်ဖိုးများကို Apply
★ SD က Booster ★
☆သင့်ရဲ့ SD ကဒ်၏မြန်နှုန်းကိုတိုးပှား
ROM ကို Toolbox ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ Thank you! မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်အဘို့, contact@maplemedia.io မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် - Backup ကိုခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းနှင့် SMS ကို
SMS ကို - Backup ကိုခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းနှင့် SMS ကို
Accounts ကို - Backup ကိုနှင့် Google Drive မှ restore
ROM Toolbox Pro အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ROM Toolbox Pro အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ROM Toolbox Pro အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ROM Toolbox Pro အား အခ်က္ျပပါ
mark8 စတိုး 1.13M 551.69M
ROM Toolbox Pro ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ROM Toolbox Pro အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.5.1.0
Release date: 2019-04-03 22:09:32
ROM Toolbox Pro APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ